Ahoana ny fomba hahitana endri-tsoratra amin'ny Adobe Capture | Martech Zone
Raha efa niasa tamina tetikasa iray izay nitiavan'ny mpanjifa sary vaovao na fiantohana vaovao ianao, saingy tsy fantatrao izay fonosin'izy ireo ampiasaina - mety ho mampatahotra izany. Na, raha tianao endri-tsoratra izay hitanao eto amin'izao tontolo izao ary irinao ny hampiasa azy… mirary soa anao hahita izany.
Forums momba ny famaritana endritsoratra
Tamin'ny andro taloha… toy ny folo taona lasa izay, tsy maintsy nanao an'izany ianao mampakatra sary amin'ny forum izay hahafantaran'ireo mpidoroka endri-tsoratra ny endritsoratra. Tsy mampino ireo olona ireo. Indraindray aho mampakatra sary ary manana valiny miverina ao anatin'ny minitra vitsy. Adala - marina foana!
Saika misy Toetra mampiavaka ny typografika 30, toy izany koa miaraka amina endritsoratra an'aliny maro any - mety ho sarotra tokoa ny mamantatra ny nuances ny endritsoratra. Misaotra soa noho ny Internet sy ny hery informatika.
Isika izao dia manana fitaovana samihafa mampiasa OCR (fanekena tarehin-tsoratra optika) haka ny endritsoratra ary mampitaha azy amin'ny tahiry fantatry ny endritsoratra amin'ny Internet. Misy vitsivitsy amin'ireto serivisy ireto:
Inona ny endri-tsoratra
Raha anisanao ianao Adobe Creative Cloud mpampiasa, Adobe dia manana endri-javatra mahavariana ao anatiny Adobe Capture fampiharana izay mametraka ny famantarana ny endri-tsoratra (na ny fisafidianana endri-tsoratra mitovy aminy) amin'ny fampiasana fianarana milina ary fahaizana artifisialy (AI) amin'ny felatananao amin'ny alàlan'ny fitaovanao finday. Antsoina hoe Type Capture.
Ny Adobe Capture dia ahafahanao mampiasa ny findainao a mpanova vector hamadika ny sary ho lohahevitra, lamina, karazany, akora, borosy, ary endrika miloko. Avy eo, ento any amin'ny biraonao sy ny fampiharana finday tianao indrindra ireo fananana ireo - ao anatin'izany ny Adobe Photoshop, Illustrator, Dimension, XD, ary ny Photoshop Sketch - hampiasaina amin'ny tetikasanao mamorona rehetra.
Raha hampiasa Type Capture dia makà sary font sy fampiasana Capture fotsiny Teknolojia Adobe Sensei hahafantarana ireo endrika ary manome soso-kevitra endritsoratra mitovy amin'izany. Tehirizo ho toy ny fomban-dehilahy ampiasaina amin'ny Photoshop, InDesign, Illustrator, na XD.
Adobe Capture dia manolotra fiasa fanampiny izay tena tsy mampino miaraka amin'ny famantarana ny endri-tsoratra:
Akora - Miteraha fitaovana sy firafitra PBR azo antoka avy amin'ny sary amin'ny findainao, ary apetaho amin'ireo zavatra 3D misy anao ao amin'ny Dimension.
borosy - Mamorona borosy mahazatra tsara kalitao amin'ny fomba maromaro, ary ampiasao izy ireo handoko amin'ny Animate, Dreamweaver, Photoshop, na Photoshop Sketch.
lamina - Manaova lamina geometrika amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny preset Capture, avy eo alefaso amin'ny Photoshop na Illustrator ny laminao mba hamenoana sy hampiasaina ho famenoana.
manamboatra - Manomboka amin'ny endrika tarihin-tanana ka hatrany amin'ny sary mifanohitra be, azonao atao ny mamadika ny sary ho endrika madio madio hampiasaina amin'ny fampiharana Creative Cloud isan-karazany.
Colors - Raiso sy amboary ny lohahevitra loko ary avadiho ho palette azo namboarina hampiasaina amin'ny fampiharana Creative Cloud rehetra izy ireo.
Sintomy ny Adobe Capture ho an'ny iOS Sintomy ny Adobe Capture ho an'ny Android
Tags: adobe capturemanaoforum forumsquirrelny fomba hamantarana endritsoratramamantatra endri-tsoratraTypographympanova vectorinona ity endritsoratra ity